Socdaalka Oo Customs Kormeerey Job Description / Meelaynta Oo Template Waajib - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Socdaalka Oo Customs Kormeerey Job Description / Meelaynta Oo Template Waajib
Socdaalka Oo Customs Kormeerey Job Description / Meelaynta Oo Template Waajib
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 602 Views
Baaritaan iyo fiiriyaa waxyaalaha, bixiyeyaasha baahsan, dadka, iyo alaabta, socda ama tegey oo dalka Mareykanka ah Of America ama inta u dhaxaysa ayaa sheegay in si aad u hesho xadgudubyada xeerarka socdaalka iyo hababka.
Diyaarso hawl xalaal, sida tusaale ahaan u qaadidda iyo xabsi ku hayn dadka waawayn loo aqoonsaday in uu sii joogo xad gudub ku ah caadooyinka ama sharciyada socdaalka.
Aqoonso oo hel baayacmushtarkaagii oo kontarabaan, iyo gaadiidka, diyaarad, ama motorka leh ay ku jiraan Ganacsi iyo sida.
Fahmaan oo sharax sharciyada iyo xeerarka ay u dheg-, waddanka u soo guurey la filayo, dalxiisayaasha, iyo dejiyeyaasha.
imtixaan waxyaabaha, bacaha, iyo articles gaarka ah ee galaya ama ka soo baxaya laga xoreeyo. waayo waafaqsan isticmaalaya laga xoreeyo. dhaqanka xeerarka iyo sharciyada faa'iidada.
Taariikhda iyo sahan shaqo- xawaalad, gunaanad, falalka la xiriira, xadgudub, khaladaadka, iyo doorashada.
Billow magaalada iyo sharci iskaashi iyo xeer ururada kale ee ciidanka bilayska halka ee waxbarasho iyo caddaalad oo ka mid ah xad gudub ku ah laanta socdaalka ama caadooyinkii xeerarka.
Galin ku saabsan gunaanad racfaanka socdaalka ama qolka waa qaran.
Go'aanso waajib iyo canshuuraha si ay u noqdaan bixiyaa alaabta.
tusaale u ah waxyaabaha ku saabsan qiimaynta ururiya, qiimaynta, ama imtixaanka.
Baaritaan barnaamijyada loogu soo celiyo shaqada iyo kiis ku saabsan dembidhaafka ama yareynta ganaax marka damaano.
Akhrinta weedho Aqoonta-fahmidda iyo weedho diyaar ee DoCS la xiriira shaqada.
Active Dhagaysi-Siinta wacyiga oo dhan waxa kale-oo qof ayaa leh, iyadoo la isticmaalayo waqti iyo tamar si ay u fahmaan waxyaabaha la soo saaray, codsanaya su'aalo sida ku habboon, oo aan marnaba la aqbali karin kalagoynta at xaaladaha.
Qorista-Wadahadal wax ku ool ah oo ku saabsan warqad sida saxda ah ee looga baahan yahay badnaa.
Ka hadalka-hadalka dadka kale si ay ula wadaagaan xogta si hufan.
xisaabta si loo xaliyo arrimaha Xisaabta-Adeegsanaya.
Science-mabaadii'da iyo hababka si uu u xaliyo dhibaatooyinka ay gacanta ku.
Sababta ka fakaraya-Kafaa'iidaysiga Halis una Maleeyeen in la aqoonsado faa'iidooyinka iyo duleella u ah gabagabada, beddeli kara doorashada ama hababka in dhibaatooyin.
Active-Learning-oge ah lugaha xaqiiqooyinka cusub ee labada go'aan-qaadasho la soo dhaafay oo soo socda xalinta dhibaatooyinka iyo.
Barashada Qaababka-Doorashada iyo straatejiya trainingPERinstructional iyo nidaamka ku haboon dhibaatada marka fahamka ama wacyi arrimaha cusub.
Raad-MonitoringANDAssessing waxqabadka dadka dheeraad ah, naftaada, ama ururada si ay u abuuraan horumar ama qaadaan tallaabooyin sixid ah.
Social Perceptiveness-In ka dhawrsada kuwa kale’ Doonista sababta ay u jawaabaan sida ay sameeyaan iyo fahamka.
Salesmanship-dawarsanayay dadka kale si loo hagaajiyo maskaxda ama dabeecad ay.
Wacyi-Tababarka dadka kale loogu taraaroxo u dhaqaaqdo.
Orientation-ahaantii Service doonaya xeeladaha si loo caawiyo dadka waawayn.
Advanced Mushkiladaha-Aqoonsiga arrimo aad u adag iyo dib u macluumaad in ku xiran yahay fuliyo jawaabaha iyo ilaa la dhiso iyo tixgelinta arimo kale.
Hawlgallada Qiimeynta-barashada shuruudaha wax soo saarka iyo shuruudaha loo sameeyo design a.
Engineering Design-saaridda ama qabsado qalabka iyo injineernimada si ay u siiyaan macaamiisha doonayo.
Xulashada-Go'aansiga nooca qalabka iyo aaladaha Gear u baahnaa ah si ay u fuliyaan howl.
mashiinada Rakibaadda-darista, qalabka, kaybalka, ama ay qorshaynayso in ay la kulmaan ilaa shuruudaha.
baakadaha Development-Qorista computer ku saabsan ujeedooyin badan.
Function muuqaalada Monitoring-Galitaanka, dials, ama tilmaamo dheeraad ah si loo hubiyo in ay jirto qalabka hawlgala haboon.
nidaamka of marsho ama qalabka Operation iyo Control-hortagidda.
Dayactirka-Sameynta daryeelka joogtada ah oo ku saabsan alaabta iyo go'aaminta marka iyo waxa sort of ilaalinta waxaa loo baahan yahay.
Dhib-Aqoonsiga arrimo ka dambeeya kala carar shaqaynaya iyo doorashada sida ay u sii wadi ku saabsan.
nidaamyada ama lagu daydo qamaar-celinta la isticmaalayo alaabta oo lagama maarmaan.
baaritaanada iyo jeegaga waxyaabaha Quality Control-Falanqaynta-Bandhigyada, xal, ama farsamooyin si ay u qiimeeyaan shaqeynta ama tayo leh.
Xukun iyo Go'aan ka qaadashada ku-la tixgaliyo ku eedeeyay qaraabo iyo waxyaalo waaweyn oo ku saabsan hab-dhaqanka in ay u badan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in uu yahay haboon.
Falanqaynta-Go'aaminta waxa sort of farsamo waa in shaqeeyaan iyo sida isbadalada in howlgallada, xaaladaha, iyo sidoo kale jawiga saameyn ugu yeelan karto saamaynta.
Hababka Qiimeynta-Aqoonsiga tallaabooyinka ama calaamadaha waxqabadka iyo sidoo kale marka loo eego goolasha nidaamka, tallaabooyinka loo baahan yahay in la xoojiyo ama waxtarka sax ah.
dadka kale Time Management-Xakamaynta’ waqti iyo sidoo kale mid ka mid ah ayaa xilligan gaarka ah.
Hawlgallada ee Savings-Aqoonsiga sida dollars ay u badan tahay in la maal si ay u bartaan shaqada dhammeeyo, iyo ku tirinayay ku saabsan kharashyada kuwan.
Kormeerka of Content Means-raadin ah oo ay ogaadeen dhinaca isticmaalka saxda ah ee qalabka, Astaamaha, iyo alaabta lahaa baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Management of Workers Resources-In qofka oo kobcinaya, oo hagaya dadka halka ay ay ka shaqeeyaan, aqoonsashada dadka ugu waxtarka badan ee hawsha.
Heerka Senior School (ama GED ama dugsiga sare ee isu-Certification)
Qaar badan oo Training College
Success / day – 89.22%
Rabitaan – 88.50%
Iskaashiga – 90.82%
Arrinta ku saabsan Kuwo kale – 90.25%
Sinaanta Cultural – 90.75%
Is Control – 91.84%
gaynta Stress – 90.23%
runsheegnimada – 92.57%
Fiiro gaar ah u Detail – 91.50%
xoog – 97.40%
Hal-abuurka – 86.84%
Adoo ka fakaraya Analytical – 93.20%